Shaqaalaha Hay’adda Nile oo boorsooyinkoodi ka qaatay magaalada Muqdisho (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Shaqaalaha Hay’adda Nile oo boorsooyinkoodi ka qaatay magaalada Muqdisho (SAWIRO)
Shaqaalaha Hay’adda Nile ayaa maanta boorsooyinkoodii ka qaatay magaalada Muqdisho kadib markii dhawaan ay xukuumadda federaalka Soomaaliya amar kusoo saartay hay’addaasi inay dalka uga baxaan muddo 7 maalmood ah.
Waxaa la arkayaa shaqaalaha Isbitaalka Deva oo boorsooyinkooda iyo qalabkooda ku raranaya gawaari, iyadoona maanta ay tahay maalintii ugu dambeeysay ee hay’addaasi loo qabtay inay dalka isaga baxdo.
Dr. Maxamed Al Perto oo ah agaasimaha isbitaalka Deva ee magaalada Muqdisho oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in nasiib-darro ay tahay in iyagoo shacabka Soomaaliyeed u shaqeeynayo lagu amro inay si deg deg ah uga baxaan dalka.
Wuxuu Dr. Al Perto sheegay inay dalka Soomaaliya u yimaadeen inay u shaqeeyaan shacabka Soomaaliyeed, si ay uga fuliyaan adeegyo caafimaad oo muhiim ah balse ay dalka uga guurayaan kadib markii uu soo wajahay cadaadis kaga yimid dhanka dowladda federaalka Soomaaliya.
Ilaa iyo haatan lama oga in hay’adda Nile ay qalabkooda u raran doonaan dhinaca Somaliland iyo inkale, balse waxaa jira heshiis hoosaad ay hay’addaasi la galeyso maamulka Somaliland.
Maamulka Somaliland ayaa dhawaan shaaciyay inay soo dhaweynayso hay’adda Nile, kadib markii ay xukuumadda federaalka Soomaaliya digniinta ku siisay in hay’addaasi ay muddo 7 maalmood ah dalka isagaa guurto.
Hay’adda Nile ayaa la sheegay inuu leeyahay Fathullah Gulen oo ah ninkii lagu eedeeyay inuu ka dambeeyay afgambihii dhicisoobay ee dalka Turkiga.
Si kastaba ha haataee, dhawaan ayay aheyd markii shir ay isugu yimaadeen golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ay kusoo saareen go’aan ah in hay’adda Nile muddo 7 maalmood ah dalka uga baxaan.